Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Mar dambe hanjabaado Tsunami ah oo loogu talagalay Hawaii, Guam, Saipan
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Guam • Wararka Jabinta Hawaii • News • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhulgariir 8.2 waxaa loo qaddarin karaa mid baaxad weyn leh heer kasta oo uu yahay. Kaliya dhulgariir ayaa laga cabiray xeebta Alaska Peninsula waxayna leedahay awood ay ku soo saarto tsunami Guam iyo Saipan.
Daawashada Tsunami-ka Baasifiga oo dhan ayaa la joojiyay ka dib dhulgariirkii Alaska ee 8.2
Dhulgariirro is xigxigay oo baaxad leh ayaa hadda ruxaya Jasiiradda Alaska.
Dhulgariirkii ugu darnaa ayaa lagu dhuftay 10:15 pm fiidnimo xilliga maxalliga oo leh 8.2 xoog, 2:15 am EST.
Digniinaha Sunaamiga waxaa loo dhejiyaa qaybo ka mid ah Khadka Xeebaha Alaska, Ilaalinta Tsunami ayaa loo soo saaraa Hawaii, la -talinta meelaha kale, iyo hanjabaadda tsunami ee Guam iyo Saipan waxay ku socotaa Baaritaan. Xogta Tsunami ee USGS siisay ummadaha kale ee Baasifigga
USGS waxay hadda sii daysay saadaal ah in mawjadaha tsunami ee halista ku haya xeebaha dhammaan Badweynta Baasifigga ay ka yaraan doonaan 0.3 mitir mawjada.
Tan, daawashada Tsunami ee Hawaii waa la joojiyay. Bayaan ayaa la sii daayay ma jiraan hanjabaad tsunami oo hadda jirta oo ku saabsan Guam, Saipan iyo jasiiradaha ku xeeran.
Meelaha kale, sunaamisyada waxaa lagu yaqaanay inay si qumman kor ugu kacaan 100 cagood (30 mitir). Inta badan sunaami ayaa sababa in baddu kor u kacdo wax ka badan 10 fuudh (3 mitir). Sunaamiga Badweynta Hindiya ayaa sababay mowjado gaaraya ilaa 30 fuudh (9 mitir) meelaha qaarkood, sida ay wararku sheegayaan.
Kani waa war wanaagsan oo saadaalinaya in tsunami aad u ba'an laga yaabo inaysan macquul ahayn kadib dhulgariirkii 8.2 ee Alaska ee caawa.
DHAQAALAHA TSUNAMI ayaa la saadaalinayaa inay ka yaraadaan 0.3 mitir oo ka sarraysa mawjadaha: AMERICAN SAMOA ... AUSTRALIA ... CHILE ... CHINA ... CHUUK ... COLOMBIA ... COOK ISLANDS ... COSTA RICA ... ECUADOR ... EL SALVADOR ... FIJI ... FRENCH POLYNESIA ... GUAM ... GUATEMALA ... HAWAII ... HONDURAS ... HOWLAND IYO BAKER ... INDONESIA ... JAPAN ... JARVIS ISLAND. .. JOHNSTON ... .. NIUE ... MARIANASKA WAQOOYI ... ISLAALOOYINKA WAQOOYIGA ... PALAU ... PALMYRA ISLAND ... PANAMA ... PAPUA GUINEA CUSUB ... PERU ... PHILIPPINES ... PITCAIRN ISLANDS ... POHNPEI ... RUSSIA ... SAMOA ... SOLOMON ISLANDS ... TAIWAN ... TOKELAU ... TONGA ... TUVALU ... VANUATU ... WAKE ISLAND ... WALLIS IYO FUTUNA ... IYO YAP. * AMPLITUESKA DHABTA AH EE BADDA BADAN AYAY KALA DUWI KARAAN AMPLITUDES -KA SABABTU WAXAY TAHAY WAXYAABAHA KA JIRA FASALKA IYO AQOONTA DEEGAANKA. GAAR AHAAN MAXIMUM TSUNAMI OO KA SHAQEEYA ATOLLS -KA IYO MEELAHA LAGA HELI KARO AMA HOOSAHA CARUURTA WAXA UU UU YAR YIHIIN IN UU KA MID YAHAY TILMAAMAHA HORMARKA. * DEEGAANADA KALE EE SOO SAARAY SOO SAARKAN QORSHE WELI WAA LOO KOMBIRTIRIN. WAXBARASHADA WAXA LA BALAARIN DOONAA HADDII LOO BAAHAN YAHAY SOO SAARKA.
Dhulgariirku wuxuu ka dhacay Jasiiradda Alaska markay ahayd 4:16 pm CHST Khamiistii, Luulyo 29, 2021. La -talinta tsunami ayaa hadda lagu dhawaaqay Amchitka Pass, Alaska (125 mayl W Adak), Samalga Pass, Alaska (30 mayl SW ee Nikolski ). Tani waxaa la soo saaray 7/28/2021, 9:01:58 pm.
Digniinta Sunaamiga oo Saameyn ku yeelan doonta; * KOONFUR ALASKA IYO ALASKA PENINSULA, Xeebaha Baasifigga laga soo galo Hinchinbrook Entrance, Alaska (90 mayl E of Seward) ilaa Unimak Pass, Alaska (80 mayl NE ee Unalaska) * ALEUTIAN ISLANDS, Unimak Pass, Alaska (80 mayl NE ee Unalaska) ilaa Samalga Pass, Alaska (30 mayl SW ee Nikolski) La -talinta Sunaamiga ee Saamaynta leh; * KOONFUR BADAN ALASKA, Xeebta gudaha iyo dibaddaba laga bilaabo Cape Decision, Alaska (85 mayl SE ee Sitka) ilaa Cape Fairweather, Alaska (80 mayl SE ee Yakutat) mayl SE ee Yakutat) ilaa Galitaanka Hinchinbrook, Alaska (80 mayl E of Seward) * ALEUTIAN ISLANDS, Samalga Pass, Alaska (90 mayl SW of Nikolski) ilaa Amchitka Pass, Alaska (30 mayl W of Adak) oo ay ku jiraan Falalka Jasiiradaha Pribilof badbaadinta nolosha dadka iyo hantida ayaa ku kala duwanaan doonta aagagga digniinta tsunami iyo aagagga la -talinta tsunami.
Haddii aad ku sugan tahay aag digniin tsunami ah; * Ka guur gudaha ama dhulka sare oo ka sareeya ama ka sii dheer aagaggii khatarta tsunami ee loo qoondeeyay ama u gudub dabaqa kore ee dhisme dhowr dabaq ah iyadoo kuxiran xaaladaada.
Haddii aad ku sugan tahay digniin tsunami ama aag la-talin; * Ka guur biyaha, xeebta, kana fog marsooyinka, marinnada, biyaha daadadka ah, baysyada iyo meelaha laga galo.
* Ka digtoonow oo raac tilmaamaha saraakiisha gurmadka deegaankaaga maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay hayaan macluumaad faahfaahsan ama gaar ah oo ku saabsan goobtaada.
* Haddii aad dareento dhulgariir xoog leh ama dhul -gariir ballaarran qaado tallaabooyin ilaalin oo degdeg ah sida u -soo -guuridda gudaha iyo/ama kor -u -qaadista doorbidaya cag.
* Wadayaasha doomaha, * Meesha waqtiga iyo xaaladuhu saamaxayaan, doontaada u rari badda illaa qoto dheer ugu yaraan 180 fiit.
* Haddii aad ku jirto badda iska ilaali inaad gasho biyo -gacmeed, marsooyin, marinas, marin -biyood, iyo marin -biyoodyo si aad uga fogaato burburka sabayn iyo qarqiyay iyo durdurrada xooggan.
* Ha aadin xeebta si aad u ilaaliso tsunami.
* Ha ku laaban xeebta ilaa saraakiisha gurmadka degmadu ay tilmaamaan inay sidaas tahay.
SAAMAYNTA ------- Saameyntu waxay ku kala duwanaan doontaa meelo kala duwan oo digniinta ah iyo meelaha la-talinta ah.
Haddii aad ku sugan tahay aag digniin tsunami ah; * Sunaami wata mowjado waxyeelo leh iyo mowjado awood badan ayaa suuragal ah.
* Daadadka xeebta ee soo noqnoqda ayaa suuragal ah maadaama hirarku ay yimaadaan xeebta, gudaha u soo guuraan, oo ay dib ugu soo noqdaan badda.
* Mowjado xoog leh oo aan caadi ahayn, qulqulka iyo daadadka gudaha ah ayaa hafan kara ama dhaawici kara dadka isla markaana daciifin kara ama burburin kara dhismooyinka dhulka iyo biyaha.
* Biyaha ay ka buuxaan qashin sabayn ama quusay oo dhaawici kara ama dili kara dadka oo daciifin kara ama burburin kara dhismayaasha iyo buundooyinka waa suurtogal.
* Mawjado xoog leh oo aan caadi ahayn iyo mawjadaha ku yaal dekedda, marinada, baysyada, iyo godadka laga galo ayaa laga yaabaa inay si gaar ah wax u dumiyaan.
Haddii aad ku sugan tahay aag la-talin tsunami; * Sunaami wata mowjado xoog leh iyo mowjado ayaa macquul ah.
* Hirarka iyo mawjadaha ayaa qarqi kara ama dhaawici kara dadka ku jira biyaha.
* Durdurrada ka socda xeebta iyo marsooyinka, marinnada, baysyada, iyo godadka laga galo ayaa laga yaabaa inay si gaar ah khatar u yihiin.
Haddii aad ku jirto digniin tsunami ama aag la -talin; * Saamaynta qaarkood waxay sii socon kartaa saacado badan ilaa maalmo kadib imaatinka hirarka hore.
* Mawjadda koowaad ma noqon karto midda ugu weyn markaa hirarka dambe ayaa laga yaabaa inay weynaadaan.
* Mowjad kastaa waxay socon kartaa 5 illaa 45 daqiiqo marka mawjaddu soo gasho oo dib u yaraato.
* Xeebaha u jeeda dhammaan jihooyinka waa la hanjabayaa maxaa yeelay mawjaduhu waxay ku duubnaan karaan jasiiradaha iyo jiidaha madaxa iyo godadka.
* Dhul gariir xoog leh ama rogrogid dhulka ah waxay muujineysaa dhulgariir waxaana laga yaabaa inuu tsunami soo socdo.
* Xeebta oo si degdeg ah u guraysa ama dib u guraysa, hirar iyo dhawaaqyo aan caadi ahayn, iyo durdurro xoog leh ayaa ah calaamadaha tsunami.
* Sunaamigu wuxuu u muuqan karaa sidii biyo si xawli ah ugu qulqulaya badda, mawjad kacsan oo kacsan sida daadka oo aan lahayn mawjad jabaysa, oo ah mawjadaha jaban oo isdaba -joog ah, ama derbi biyo ah oo barafoobay.
tsunami.gov Wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma jirto khatar intaa ka sii badan oo ah saameynta tsunami ee gobolka Guam Saipan iyo Hawaii. Ilaalintii Tsunami ee Hawaii waa la joojiyay
Goobta dhulgariirku waxay ahayd 5.5 Waqooyi, 157.9 Galbeed. Moolku wuxuu ahaa 11 mayl.
Ma jiraan wax dhaawac ama dhaawac ah oo laga filayo dhul kasta oo Alaska ah waqtigan. Wax Hanjabaad Tsunami ah looma soo saarin Hawaii ama gobol kasta oo xeebaha Mareykanka ama Kanada ah.